Muuse Biixi wasiirada qaar ma magbuu uga dhigayaa kuwii uu diley - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Muuse Biixi wasiirada qaar ma magbuu uga dhigayaa kuwii uu diley
SOMALIA & SOMALILAND Dagaal koodu wuxuu soconayaa #18bilood 4 waa dhacday Dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda xuduudka Somaliland Bishii la soo dhaafay, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu u muuqdaa inuu qaatay xayiraad sii kordhaysa.
Ugu horreyntii, waxa uu ka codsaday dhiggiisa Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, inuu siiyo ciidan gaaraya 3,000 oo qof.
Dhowr toddobaadyo gudahood, ciidamada Puntland ayaa laga soo wareejiyay buuraha Galgala si ay ula socdaan xagjiriinta Islaamiga ah ee Al-Shabaab, kuwaas oo ah khatarta ugu weyn ee ka jirta dawladda dhexe. oo ah xarun milatari oo ku yaalla Garoowe, halkaas oo ay u muuqato in Muqdisho ay dib u habaynayso ciidamadeeda si ay u diyaargaroobaan hawlgallada laga fulinayo gobolka Sanaag ee Somaliland.
Farmaajo wuxuu Soo bandhigaay waxyaabahan loo adeegsaday si ay uga jawaab celinayaan colaadaha u dhexeeya Somaliland iyo Puntland ee ku yaala gobolka khatumo.
Gobolkaasi waxaa degan Dolbahante, oo ah qabiil oo xiriir la leh Mareexaan, Farmajo gaar ahaan waa qabiilka kaasi . Laakiin, Hase yeeshee, dadka deggan Khatumo waxay door bideen inay xiriir dhow la yeeshaan maamulka Hargeisa dhulkooda, halkii ay ka soo jeedaan jinsiyad ahaan . Farmajo, oo
hamigiisu yahay in Somaliland’ ay noqoto dhamaan Aag dagaal gebi ahaanba gobolada somaliland Iyadoo uu ka faaiidaysanayo Farmaajo ama libin uu ka helay in meelaha ugu muhiimsan maamulka hargeisa uu soo dhaafi waayey Qabiilka muse Bihi Maamulka 68 wareegto reerkiisa yihiin . Farmaajo
wuxuu ku wareejiyey Puntland Ciidamado Cududeh oo Calooshooda u shaqaysta inaysan u adeegin Somaliland lana shaqaystaan Farmaajo, laakiin ma oga taas oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo maamulka Khatumo, taas oo loo maleynayo in ay haysato kaydka shidaalka ah. aad iyo aa u badan
goobaha shidaalku waa 36’000 mile 2 oo u dhiganta bedka dalka Taiwan Qeyb ka mid ah Dagaalka Farmaajo cayaaraha qiiqa , dhagarta,dhiiga daadanayaaye ee uu dadkena ku bedeshay saliid iyo macdan dad shisheeye damacsan yihiin . Aragtida muraayadaha, Farmajo Hadafkiisu waa
khalkhalinta Dalka simaliland wuxuu u diray wasiirkiisa horumarka, Jamal Maxamed Xasan, safar gaaban oo ah bariga Sanaag. Biixi si caddaalad ah ayuu hoos u dhac ugu yimid waana daacad mana fahansana siyaasadaha gobolka Inta u dhowna waa beenaalayaal xaqiiqo aan ogayn oo la haysan siyaasad , muse isaga oo u sheegaya baahida loo qabo in uu difaaco sharaftiisa dhulkiisa.
Hase yeeshee, wax iska horimaad dhab ah weli ma jiraan, bisha june 2018 laakiin xiisadaha ayaa sii socda.
Hadaan soo koobo Sida xalku yahay Waxa muusoow Umusha u dan aha ayaa ilmaha u dan ah markaa dantaadu waa danta Umada aad wada dagtaan oo aad si aqli gal ah kuraasta maamulka u gaadhsiiso.
Nin walba wuxuu taray ayaa la tirsadaa tusaale waxaa ku filan i Geesiyo ayaa soo maray dalka Mw Cigaal ehlu jano ayuu ahaaye & #Rayaale cafimaadka allaha u daayo . labaduba waxay ahayeen
geesiyaal cidna kama cabaymnayso dalkana wax la taaban karo ayey uga tageen . walahi Cid wax ka sheegta arki maysid wanaag mooyaane . 1.Dhibaatada Muse bihi Ku habsatay waa mid u ka gudbi karin. waa hadii uu joojiyo nin jeclaysi , iyo Qabyaalad qaawan oo Isaaqnimo ah oo xitaa isaaq u
roonayn oo uu kala jebiyey isbaahaysi cad . 2. Wasiiradiisa oo ah Niman Aad & aad u jilicsan , lamana haystaan marxaladaha Siyaasada caalamka . oo niman Sawirada ay galeen 27 sano ka hor ku qiimaynaya dalka macaluul, sixir barar , dagaal , aafo & duufaan intuba ay jirto sawir isaga u gaara ,
kulahaa horumar ayey somaliland gaadhay cabirkiisuna waa wakhtigii uu Bilaacamalka ahaa iyo isagoo suudh xidhan sow kaaf & kala dheeri sow maaha . 3. deg-deg waa inaad bedeshaa sxbkaa xisbiga kulmiye waad ku wareejin doontaye 14 bilood ee dagaalka inta laga baxaayo Somalia farmaajo kugu wado ha nasto ,wasiirka arimaha gudaha, kuna bedel Dhulmahante iyagaa reerkooda fahansan ,
Gadhba Gadhbaa la Tusaa iyagaana fahmaaya iyo Cidaanka ama Taliyayaasha beriga 2 Gobol ee beriga ciidan. 4. Gedo-buursina waa Wasiirka Madaxtooyada Anigabaa u diyaara wuxu tagayaa sxbkay & Wasaarada Arimaha Dibada #Prof #Ahmed ismail Samatar Walahi halkuu ka gaadhay
siyaasad Xataa qof islaam ahi weli abid ma gaadhin Gaaladuna way ka cabsadaan waana raga iriq kasta oo la xidho soo afjaraaya iyagaa fahmaaya farta oo lahaysta diplomacy ah , kana hadla
Dhibaarooyinka Dadka soomaalida Sidaan wada ognahay . 5 billod gudahood ayan muamaaraadkaasi kusoo afmeeraynaa waa hadaad raacday taladaas 5. Marmarka qaar waxaad iswaydiinaysaa Wasiirada Qaar Siiba isaaqa kuwa u matala dowladiisa #muse bixi ma kuwii uu jihadism SNM uu Aabayaashood
kulaayey oo wuxu uga dhigay Mag Si uu u ilowsiiyo Shirqoolkii uu aabayaashood ku laayey ilayn xariif ayaad ku ahayd dhanka Khaarijinta markaad ahayd SNM. Hadase waan ku cafinee ulel amri ayaa soo afjartay. 6.Horta mudane Daacad ayaad tahay oo farta ayaad la.
Qalinkii Mukhtaar Cali Aadan